Dacwadda heerka fasalka ah ee ka dhanka ah Apple ee sawirada MacBook Pro 2011 horey ayaa looga jawaabey 7 sano kadib | Waxaan ka socdaa mac
Dacwadda heerka fasalka ee ka dhanka ah Apple ee sawirada MacBook Pro 2011 horey ayaa looga jawaabay 7 sano kadib
Sannadkii 2014, toddobo sano ka hor, waan kuu sheegnay in isticmaaleyaasha qaarkood ay ku biireen oo ay xareeyeen dacwad ficil heer fasal ah oo ka dhan ah Apple xaalad xumida iyo waxqabadka GPU-yada ee MacBook Pro 2011. Waxaa jiray cilad ku timid GPU-gooda taas oo sababtay kuwa ay saameysay cilad garaaf ah waqti ka waqti mashiinkooda. . Qaar ka mid ah adeegsadayaashu waxay bedeleen garaafka iyaga oo bixinaya kharashyada waana tan ay sheegteen sannado badan ka hor. Hadda caddaaladda ayaa ka jawaabtay, ugu yaraan Kanada.
Apple waxay u timid inay wax ka bedesho qaar ka mid ah kombiyuutarradan dhowr ka mid ah kuwa ay saameysay, laakiin in yar oo yar oo adeegsadayaal ah ayaa la soo baxay isla dhibaatadaas. Xaaladda ayaa noqotay mid aan la sii wadi karin oo isticmaaleyaal badan ayaa horay u bixiyay kharashyada sababay isbeddelka garaafka. Sababtoo ah waa wax qiiro leh waxay go'aansadeen inay ku biiraan iyo fayl garee dacwad ficil ah si ay shirkaddu u bixiso kharashyada.
Hada Quebec waxay ku heli karaan lacag celin dayactir kadib sheegashada. Ku dhowaad toddobo sano ka dib, maxkamadda Kanada ayaa ugu dambeyntii oggolaatay heshiis. Waxay ku dambayn doontaa Apple inay dib u soo celiso macaamiisha ay khusayso. Sida ay soo warisay PCMag, heshiiska waxaa toddobaadkan xaqiijiyay Maxkamadda Sare ee gobolka Quebec. Waxay sheegaysaa in qof kasta oo iibsaday 2011 15-iyo 17-inch MacBook Pro oo leh AMD GPU oo ku nool Quebec uu xaq u leeyahay lacag celin wixii dayactir ah ee la xiriira oo lagu bixiyo damaanad la'aan.
Dacwada ayaa ku dooday in macaamiisha lagu qasbay inay bixiyaan ilaa $ 600 oo dayactirka ah. Heshiiska ayaa qeexaya in milkiilayaasha MacBook Pro 2011 ay saameeyeen waxay heli karaan 175 doolar oo Kanadiyaan ah (qiyaastii 120 euro), wixii dhibaato ah ee ay qabeen, oo lagu daray lacag celin buuxda kharashaadka dayactirka kale.
Heshiiska waa la heli karaa iyada oo loo marayo degelkan in waa la cusbooneysiin doonaa maalmaha soo socda oo leh faahfaahin dheeraad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dacwadda heerka fasalka ee ka dhanka ah Apple ee sawirada MacBook Pro 2011 horey ayaa looga jawaabay 7 sano kadib
Lenovo ayaa hogaamisa habka loo dalbado Apple Magic Mouse